HAGAAJI TUMBLR BLOGS KALIYA WAXAY KU FURMAYAAN HABKA DASHBOARDKA - JILICSAN
Hagaaji Tumblr Blogs kaliya waxay ku furmayaan Habka Dashboardka
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Julaay 21, 2021
Tumblr waa goob fiican oo lagu dhejiyo laguna akhriyo blogyada. App-ka waxaa laga yaabaa inuusan u caan ahayn sida Instagram ama Facebook maanta, laakiin wuxuu sii ahaanayaa inuu yahay abka la doorbido isticmaaleyaasheeda daacadda ah ee adduunka oo dhan. Nasiib darro, sida xaaladdu tahay codsiyo badan, waxa laga yaabaa inay la kulanto kutaanno xun ama khaladaad farsamo.
Waa maxay Tumblr Blogs oo keliya ku furmay qaladka Dashboardka?
Mid ka mid ah khaladaadka la soo sheegay ayaa ah Tumblr blogs oo keliya oo ku furmaya qaabka Dashboardka. Waxay la macno tahay in marka adeegsaduhu isku dayo inuu furo blog kasta isagoo adeegsanaya Dashboard, baloogga la sheegay wuxuu ka furmayaa gudaha Dashboard-ka laftiisa ee maaha tab ka duwan, sida ay tahay. Galitaanka blogyada tooska ah ee Dashboard-ka waxay u ekaan kartaa mid hagaagsan, laakiin waxa laga yaabaa inay burburiso waayo-aragnimada Tumblr ee aad caadaysatay. Maqaalkan, waxaan ku taxnay habab kala duwan oo kaa caawin kara inaad hagaajiso blog-ka Tumblr ee ka furan kaliya arrinta qaabka Dashboard-ka.
Sida loo hagaajiyo Tumblr Blog wuxuu ku furmay kaliya habka dashboardka
Habka 1: Bilawga Blog ee tab cusub
Habka 2: Isticmaal Google Chrome Extension
Habka 3: Eeg Blogyada Qarsoon
Marka loo eego isticmaaleyaal badan oo Tumblr ah, dhibaatada baloogyada ku furan kaliya Dashboardka ayaa ka soo baxa inta badan nooca shabakadda ee abka. Sidaa darteed, waxaan ka wada hadli doonaa xalalka arrintan ku saabsan nooca shabakadda Tumblr oo keliya.
Markaad gujiso baloogga ku yaal Dashboardkaaga Tumblr, baloogu wuxuu ka soo baxaa dhinaca bidix ee ka muuqda dhinaca midig ee shaashadda kumbuyuutarka. Habka dhinac-sidebarka ayaa faa'iido leh markaad rabto inaad si degdeg ah u dhex marto blog-ga. In kastoo, bar yar oo ay weheliso Dashboard-ka aan jawaab-celinta lahayn waa hubaal inay xanaaqi doonto marka waxa kaliya ee aad rabto inaad sameyso ay tahay inaad akhrido blog oo dhan.
Tilmaamaha bar-side waa sifada la dhisay ee Tumblr, sidaa awgeed, ma jirto qaab lagu joojin karo. Si kastaba ha noqotee, xalka ugu fudud uguna tooska ah ee lagu hagaajinayo Tumblr blog-ku wuxuu u weeciyaa arrinta Dashboard-ka waa furitaanka blog-ka tab gaar ah. Waxaad ku samayn kartaa laba siyaabood:
Xulashada 1: Isticmaalka midig-guji si aad u furto isku xirka tab cusub
1. Bilaw wax kasta browserka webka oo u gudub dhanka Tumblr bogga shabakadda.
laba. Soo gal Ku shub akoonkaaga Tumblr adiga oo gelaya isticmaalehaaga iyo eraygaaga sirta ah.
3. Hadda, hel meesha blog Waxaad jeceshahay inaad aragto oo gujiso magaca ama cinwaanka blogga. Blog-gu wuxuu ka furmi doonaa dhinaca aragtida.
4. Halkan, midig-guji astaanta ama cinwaanka blog-ka oo guji Ku fur xiriiriyaha tab cusub , sida hoos ku sawiran.
Blog-ku wuxuu ku furmi doonaa tab cusub oo biraawsarkaaga shabakadeed, oo waxaad ku raaxaysan kartaa akhrintiisa.
Xulashada 2: Isticmaalka mouse & kiiboodhka gaaban
Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah in aad blog ka furto tab cusub adiga oo kaashanaya mouse-kaaga ama kiiboodhkaga sida soo socota:
1. Dhig cursorka dushiisa isku xirka blog-ga oo taabo kan badhanka jiirka dhexe in la furo blog-ga tab cusub.
2. Haddii kale, taabo Ctrl + badhanka jiirka bidix in la furo blog-ga tab cusub.
Sidoo kale Akhri: Sida loo tirtiro fariimaha Snapchat
Google Chrome wuxuu bixiyaa kordhinta Chrome ka ee cajiibka ah oo aad ku dari karto si ka wanaagsan oo degdeg ah waayo-aragnimo wax u baadho. Tan iyo markii aad gujiso baloogga Tumblr wuxuu u furayaa aragtida dhinaca, waxaad isticmaali kartaa kordhinta Google si aad u hagaajiso baloogga Tumblr kaliya wuxuu ku furmay qaabka Dashboardka. Kordhintaani waxay ku anfacaysaa markaad rabto inaad ku furto xidhiidhyada tab cusub, oo aan ku jirin isla bogga.
Intaa waxaa dheer, waxaad heleysaa ikhtiyaarka aad ku habeyn karto oo aad awood u siiso kordhintan si gaar ah kalfadhiyada Tumblr. Waxaad isticmaali kartaa dheer-riix tab cusub kordhin ama, dhagsii tab.
Raac tillaabooyinka la bixiyay si aad ugu darto kordhintan Google Chrome:
1. Daahfurka Chrome oo u gudub Dukaanka shabakada Chrome.
2. Raadi 'long press new tab' ama ' dhagsii tab ' kordhinta ee baararka raadinta . Waxa aanu tusaale ahaan u isticmaalnay balaadhinta taabka cusub ee saxaafadda dheer. Tixraac sawirka hoose.
3. Furo dheer-riix tab cusub kordhin oo guji Kudar Chrome , sida ka muuqata.
4. Mar labaad, dhagsii Ku dar kordhin , sida hoos ka muuqata.
5. Ka dib markaad ku darto kordhinta, dib u soo dejiso Tumblr Dashboard .
6. raadi blog waxaad jeceshahay inaad furto. Guji magac ee blogka ilaa nus ilbiriqsi si aad ugu furto tab cusub.
Iyada oo ay weheliso dhibaatada furitaanka blog ee qaabka Dashboardka ee Tumblr, waxa kale oo aad la kulmi kartaa baloogyada qarsoon. Markaad gujiso si aad u gasho baloogyadan, waxay keenaysaa a bogga lama helin qalad
Isticmaale Tumblr ayaa laga yaabaa inuu awood u yeesho sifada qarinta
Shil ahaan - Tani waxay kaliya u oggolaan doontaa maamulka ama isticmaalaha inuu galo blog-ka si qarsoodi ah.
Si loo hubiyo qarsoodiga - Kaliya isticmaalayaasha la oggol yahay ayaa awoodi doona inay arkaan blog-ga.
Si kastaba ha ahaatee, sifada qarinta ayaa laga yaabaa inay ka hor istaagto isticmaalayaasha inay galaan oo furaan blogyadaada.
Waa kuwan sida aad u joojin karto sifada qarinta Tumblr:
mid. Soo gal Ku shub akoonkaaga Tumblr oo guji astaanta astaanta laga bilaabo geeska kore ee midig ee shaashadda.
2. U tag Dejinta , sida ka muuqata.
3. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto liiska dhammaan balooggaaga hoostiisa Blog qaybta.
4. Dooro blog waxaad rabtaa inaad qariso
5. Hoos u dhaadhac oo tag meesha Muuqashada qaybta.
6. Ugu dambeyntii, dami ikhtiyaarka calaamadeysan Qari .
Taasi waa; Blog-ku hadda wuu furmi doonaa oo ku shubi doonaa dhammaan isticmaalayaasha Tumblr ee isku dayaya inay galaan.
Intaa waxaa dheer, isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay galaan blog-ka tab cusub, haddii loo baahdo.
4-ta Apps ee ugu Wanaagsan dhanka Baraha Android
Android TV vs Roku TV: kee fiican?
Hagaaji HBO Max Aan Ka Shaqeyneynin Roku
Sida loo Discord Duljoogta
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu ahaa mid waxtar leh, oo aad awooday hagaajin barta Tumblr ee ka furan kaliya arrinta Dashboardka . Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama soo jeedin ah oo ku saabsan maqaalka, markaa xor ayaad u tahay inaad noogu sheegto qaybta faallooyinka ee hoose.